मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्नेलाई कोरोना भत्ता, फ्रन्टलाइनर आन्दोलनमा – Health Post Nepal
मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्नेलाई कोरोना भत्ता, फ्रन्टलाइनर आन्दोलनमा
२०७७ माघ १६ गते १७:२०
वीर अस्पातलका आवासीय चिकित्सक
कोरोना भाइरसको महामारीको विरुद्धको अग्रपंक्तिमा खटिएका एक योद्धा हुन हस्त कठायत।
कोरोना संक्रमणको सुरूवात देखि नै दिन—रात नभनी उनी खटिए।
उनले हजारौँ संक्रमितलाई समयमा अस्पताल पुर्‍याएर बचाएका छन्। तर, सरकारले वाचा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता हालसम्म पाएका छैननन् ।
त्यस्तै, संक्रमितको उपचारमा खटाएर अस्पतालले जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै वीर अस्पतालका दुई सय भन्दा बढी आवासीय चिकित्सक बिहीबार पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उनीहरूको एउटै गुनासो छ,कुर्सीमा बस्नेलाई जोखिम भत्ता, हामी फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई किन वञ्चित गरेको ?।
‘हामी ज्यानको बाँजी लगाएर काम गरेका छौं। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भत्ता दिने कुरा आश्वासन मात्रै दिएको छ,’ कठायत भन्छन्, ‘विभिन्न वहाना बनाएर छल्ने काम मात्र गरेको छ।’
सरकारकोे यस्तो झुठो आश्वासनले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्दै गएको छ।
‘संक्रमित बचाउनका लागि आफैं मरेर लागिपरेका छौं,तैपनि सरकारले आफ्नो भत्ता दिने प्रतिबद्वता पुरा गरेको छैन, जसको कारण स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्दै गइरहेको छ, कठायत भन्छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक र कर्मचारी गरी ५ सय जनाभन्दा बढी संक्रमित भए । संक्रमितको उपचारमा खटिँदा खटिँदै ४ जनाले निधन भयो।
‘कोरोना उपचारमा खटिएका ४ जना सहकर्मीलाई गुमायौँ । ५ भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए,’ अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन एव छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले भने।
२०७६ चैत ३ मा बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संक्रमणको जोखिम आधार तोकेर जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रयोगशालामा खटिएका व्यक्ति, उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई लगायतका फन्टलाइनमा रहेका व्यक्तिलाई सुरूको तलवको सय प्रतिशत र अन्य जनशक्तिलाई ७५ र ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइने निर्णय गराएको थियो।
‘बषौँ सम्म आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी स्वास्थ्यकर्मी काम गरे। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन भन्दै जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यसरी आफैले गरेको वाचा पुरा गर्न सक्नुले स्वास्थ्यकमीको मनोबल घटेको छ,’ दासले भने।
सरकारले अस्पताललाई बिरामी उपचार गरेबापत तीन महिनाको भुक्तानी दिएको छ।
सरकारले साधारण बिरामीे ३ हजार ५ सय, मध्यम खालका बिरामी ७ हजार र आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामकिो उपचार गरेबापत १५ हजार प्रतिदिन अस्पताललाई दिने निर्णय थियो।
सरकारले दिएको बिरामी उपचार गरेबापत दिएको रकमबाट शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनभत्ता दिने तयारी गरेको छ।
‘यत्रो समयमा सम्म हजारौँ बिरामीको उपचार गर्यौ, तर सरकारले तीन महिनाको भुक्तानी दिएको छ,’ डा. दासले भने, ‘न त बिरामीको उपचारको गरेबापत भुक्तानी नि पायौँ। न जोखिम भत्ता नै।’
सरकारको यस्तो नैतिकताले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको डा. दास भनाई छ ।
गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्न लगायतलाई साउन १ मा २५ लाखको निःशुल्क बिमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मृत्यु हुनेका परिवार र संक्रमितले बिमाबापत पाउने रकम दाबी भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले बिमा र प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको नै एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । जसले सेवा गर्दा ज्यान गुमाए न जोखिम भत्ता पाए, न मृत्युपछि बिमाबापत पाउनुपर्ने रकम नै पाएका छन्,’ डा. दासले भने।
वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले सुरुदेखि नै भत्ता नपाएको गुनासो छ । गुनासो लिएर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनसमेत पुगेका थिए । जोखिम भत्ताको माग गदै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर, वीर अस्पतालले भत्ता उललब्ध गराउने सर्तमा आन्दोलन रोकेका थिए।
तर, सहमति भएअनुसार जोखिम नपाएपछि पुन आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
‘कोभिड जोखिममा स्वास्थ्यकर्मीले अगाडि सरेर काम गरे तर, जोखिम भत्तामा पछाडि परेका छौ,’ वीर अस्पतालम कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने।
‘हामीले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटियौं, तर अस्पतालले हामीलाई जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पनि दिएन। कुर्सीमा बस्नेलाई कारोना भत्ता पाए। फ्रन्टलाइनरले आन्दोलन गर्नुेपर्ने भयो,’ उनले भने।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भत्ता नदिएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी जानकारी दिए ।
‘सरकारले अस्पतालाई कोभिड अस्पताल घोषणा गर्यो। सबै स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा सम्लग्न भए,’ डा. सेञ्चुरीले भने, ‘तर सरकारले घोषणा गरेअनुसार रकम भुक्तानी गरेन।’
स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र करोडौभन्दा बढी जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, डा. सेञ्चुरीले भने।
‘यत्रो कर्मचारी खटाएर काम लगाउनुपरेको छ। जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउन विषयमा मन्त्रालयले बुझ्न नसकेकोमा गुनासो गरे ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका कर्मचारीहरूले भत्ता नपाएको विभागीय प्रमुखलाई गुनासो गर्ने गरेका छन्।
कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुँदा टोल–टोलमा पुगेर स्वाब संकलनमा खटिए इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका ल्याब टेक्निसियन जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैइनन।
ईडीसीडीका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले साउनयता भत्ता पाउन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको छ ।
‘सयभन्दा बढी कम कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै गुनासो गरिराख्नु भएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘कान्ति अस्पतालमा पनि भत्ता पाएका थिएनन । यहाँ पनि यही समस्या रहेछ।’
सरकारले जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्दै गएको डा. पौडेल बताउछन्।
मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्तिक सम्म जोखिम भत्ता लिइसके
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कार्तिकसम्म जोखिम भत्ता वितरण गरेको दाबी गरेको छ। कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको गुनासो आइरहँदा भने मन्त्रालयका कर्मचारीले भत्ता बुझिसकेका छन्।
सरकारको निर्णय अनुसार कार्तिक सम्म जोखिम भत्ता सबैले पाएको मन्त्रालयका लेखा प्रमुख दिलकुमार खड्का बताउँछन्।
‘सरकारले निर्णय गरेसम्मको भत्ता पाएका छन्। नीजि तथा प्रतिष्ठान अस्पताललाई बिरामीको संख्याको हिसाबमा कार्तिक सम्मको रकम पठाएका छौ,’ उनले भने, ‘ तर, उहाँहरूले त्यहीबाट जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्थ्यो।’
‘मन्त्रालयका सबै कर्मचारीले कात्तिकसम्मको भत्ता पाइसकेको छ।’
‘कात्तिक यताको भत्ता भने अर्थले मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च मितव्ययिता मापदण्डविपरीत हुने भएकोले फ्रन्टलाइनमा कार्यरत निश्चित व्यक्तिले मात्रै भत्ता पाउछन्,’ खड्काले भने , ‘अब मन्त्रालयका तथा विभागका कर्मचारीले भत्ता पाउँदैन।’
उनका अनुसार कार्तिक यता ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारी, कोभिड उपचारमा प्रत्यक्ष खटिएका कर्मचारीलाई मात्र जोखिम भत्ता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।